4 Qodob oo sababi kara in uu Xidig ku guulaysto Xilka G/baarlamaanka Soomaaliya... - www.xogtashacabka24.com | www.xogtashacabka24.com 4 Qodob oo sababi kara in uu Xidig ku guulaysto Xilka G/baarlamaanka Soomaaliya... - www.xogtashacabka24.com
4 Qodob oo sababi kara in uu Xidig ku guulaysto Xilka G/baarlamaanka Soomaaliya…
Doorashada Gudoomiyaha barlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka dhacaysa magaalada Muqdisho iyadoo musharaxiinta ugu cad cad kursigaan ay kala yihiin Xildhibaan Xidig iyo Prof Jawaari.
Hadaba Shabakada Wararka Siyaasada ee xogtashacabka24.com ayaa halkan idiinku soo gudbineysa shan sabab oo Xidig ku hogaamin karta inuu noqdo gudoomiyaha barlamaanka Soomaaliya.
1 – Ruug cadaanimada Xidig: Musharaxa Xidig ayaa ah Ruug cadaa siyaasi ah isla markaasna mudo badan kusoo dhex jiray siyaasada Soomaaliya xidhiidh fiicana la leh maamul goboleedyo Soomaaliya ah iyo beesha caalamka.
2- Musharixiinta beesha raxanwayn oo tiro badan: Waxaa ka sharaxan beesha raxanwayn musharixiin dhowr ah taasina waxay sahli kartaa in ay kala jabaan isla markaasna uu meel cidlo ah ka qaato kursiga musharaxa Xidig. Dhanka kale Shariif Xasan Sh Aadan ayaa la fahansan yahay inuu ka danbayay in Xidig uu isku soo sharaxo gudoomiyaha barlamaanka si uu fursad ugu helo inuu isku soo sharaxo xilka madaxwaynaha isagoo samaysanaya xulufo cusub.
Arintan ayaa ka dhigeysa in Xildhibaanada laga soo doortay Koofur Galbeed ay boqolkiiba 70 taageersan yihiin siyaasada Shariif Xasan ayna ucodayn doonaan in Xidig loo doorto gudoomiyaha barlamaanka.
3- Kuraasta Waqooyiga Soomaaliya: Madaxwaynaha dowlada Soomaaliya Xasan Sheekh iyo RW CC ayaa la fahansan yahay inay taageerada ugu badan ka haystaan xubnaha gobollada Waqooyi SoomaaliLand kasoo jeeda.
Si kastaba, Xubnahan ayaa ku biiri doona isbahaysiga beesha Daarood looga saarayo inay utartanto xilka madaxweynaha Soomaaliya iyagoo udooran doona Xidig afhayeenka golaha Shacabka.
4 – Taageerada Beesha caalamka: Xidig ayaa wuxuu taageero ka haystaa wadamada dariska iyo qar kamid ah beesha caalamka oo la rumaysan yahay inay taageero xoogan siinayaan musharaxa musharaxan kasoo jeeda Jubbooyinka iyadoo ay musharixiintu tageero kawada haystaan wadamadaasi.
NB: Xidig oo si wayn ugu soo dagaalamay wakhtigii uu buuqu ka jiray Jubbaland ayaa wuxuu si wayn ugu soo caan baxay in uu garab istaagay maamulka Jubbaland taasi oo sababtay in uu taageero wayn ka helo dhanka shacabka reer Jubbaland.
Si kastaba ha ahaatee waxay shabakada xogtashacabka24.com isha ku haysaa si daqiiq ahna idiinku soo gudbini marba halka ay wax marayaan..